Ubone intuba yokuziphilisa, wagxuma wahlala kwezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uLindokuhle Dlezi, oneminyaka ewu-26, usengene shi kwezolimo ngenkampani yakhe iWorthy Land and Farming.
UDlezi, odabuka Oshabeni, ePort Shepstone, oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natali, uthi ungene kwezolimo ngoSepthemba nyakenye ngemva kokwenza ucwaningo ngomkhakha wezolimo namathuba akhona kuwona.
“Ukungena kwami kwezolimo kwenzeka ngemva kokuthi ngenze ucwaningo ngalo mkhakha. Ngathola ukuthi maningi kakhulu amathuba akuwona, nokuthi-ke sivele sincane isibalo sabantu abagxile kwezolimo endaweni yangakithi ekubeni sinomhlaba (omningi),” kusho yena.
Uthi ngenxa yokuthi kubo bekuvele kunomhlaba omkhulu ongasetshenziswa akayiswelanga indawo yokulima. Okunye okwenze wangena kwezolimo wukuthi ubefuna ukuthi kube khona akwenzayo, angahlali nje engenzi lutho elinde amathuba omsebenzi.
“Ngemuva kokuphothula izifundo zami ze-Electrical Engineering ngo-2018 ngibonile ukuthi kungesize ngalutho ukuhlala nje ngingenzi lutho. Ngabona ukuthi kumele kube khona into engiyenzayo engingakwazi ukuziphilisa ngayo,” kusho uDlezi, othweswe iziqu eMangosuthu University of Technology ngo-2019.
Uthi ukuntula abazomxhasa ngemali nezinsizakusebenza ngenye yezingqinamba ezinkulu abhekane nazo, ikakhulukazi njengoba ewumlimi osemncane nosazama ukuzinza kule ndima.
“Kunzima kakhulu ukuthola abaxhasi, ikakhulukazi uma ufana njengami ungenaso isicucu semfundo esihambisana nomkhakha wezolimo. Okunye-ke futhi wukuthi wukuncintisana kudla lubi singabalimi,” kusho uDlezi.
Uthi nokho okumthokozisayo wukuthi ispinashi neklabishi akulimayo kudayisa kahle. Uthi usedayisela izitolo zasoShabeni namaphethelo.
Iklabishi nesipinashi leWorthy Land and Farming
Mayelana nasekufunde ebhizinisini, uthi kumqoka ukuliphatha ngobunyoninco, wonge imali, wenze nesiqiniseko sokuthi kuhlale kunemali eyanele ongayisebenzisa uma kwenzeka kuvela izimo ezidinga imali ngokushesha.
“Okunye-ke futhi wukuthi kumele uzihluphe ngolwazi, (uthekele) ulwazi kwasebevele bephambili kule ndima. Njengami nje, ngizihlupha kakhulu ngifuna ulwazi. Ngiya ngisho nasemNyangweni wezoLimo uma ngidinga izeluleko. Sengike ngaxhumana futhi noMnu u-Andile Ngcobo, ongomunye wabalimi abenza kahle kakhulu, kwakuningi nangicebisa ngakho ngalo mkhakha,” kusho yena.
UDlezi uphethe ngokuthi akuhlosile manje wukukhulisa indawo ayilimayo maduze agcine eselima amahekthare amabili, angagcini ngokudayisa ePort Shepstone namaphethelo kuphela kodwa umkhiqizo wakhe ukwazi ukutholakala ezweni lonke.
Facebook: Worthy Land and Farming